शा-री-रिक सु-खभो’ग दुई व्यक्तिको बीचको स-म्बन्ध गाढा र प्रेम वृद्धि गर्न एक माध्यम हो । यसले सम्बन्धको घनिष्टता बढाउँछ र दुबै साझेदारहरूले खुशी र आ-नन्द पाउँछन् । तर धेरै महिलाहरु शा-रीरिक सु-खभो’ग पछि खुशी महसुस गर्दैनन्, बरु चिन्तित हुन्छन् ।
धेरै महिलाहरु शा-रीरिक सु-खभो’गपछि रु-न थाल्छन् । यदि तपाईं आफैंले यो अवस्था महसुस गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि यो तपाईंसँग मात्र हुन्छ भने हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यो एकदम सामान्य समस्या हो । विज्ञानमा, यो समस्यालाई पोष्ट कोइटल डिसफोरिया (पीसीडी) भनिन्छ ।
‘कहिलेकाँही शा-रीरिक सु-खभो’गको समयमा महिलाहरू यत्ति उत्साहित हुन्छन् कि उनीहरूको दिमागका सबै कोषहरू सँगै काम गर्न थाल्छन् । यसले उनीहरूलाई सबै प्रकारका…
क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक डा. भावना बर्मी भन्छिन्, ‘कहिलेकाँही शा-री-रिक सु-खभो’गको समयमा महिलाहरू यत्ति उत्साहित हुन्छन् कि उनीहरूको दिमागका सबै कोषहरू सँगै काम गर्न थाल्छन् । यसले उनीहरूलाई सबै प्रकारका भावनाहरू महसुस गराउँछ ।
रुनु वास्तवमा आराम गर्ने एउटा तरिका हो । हामी सबैको दिमाग रो-एपछि शान्त हुन्छ । पीडा बाहेक पीसीडीका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ ।’ यी ५ कारणहरू छन् जसले तपाईंलाई वा तपाँईको पार्टनरलाई शारी-रिक सु-खभो’गपछि रुन वा-ध्य पार्छन ।
१, शा-रीरिक सु-खभो’गपछि प्रेम अभिव्यक्तिको अभाव
के तपाईं र तपाईंको पा-र्टनर शा-री-रिक सु-खभो’गपछि कुरा गर्नुहुन्छ ? के तपाईं दुबैजना प्रेम गर्नुहुन्छ ? हामी तपाईंलाई बताउँछौं तपाईंको भावनात्मक स्वास्थ्यको लागि यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।
यसले त्यो व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण महसुस गराउँदछ जोसँग तपाँईंले शारी-रिक सु-खभो’ग राख्नुभयो । यो किन शारी-रिक सुखभो’गपछि प्रेम वा संलग्नताको अभावले तपाईंलाई अनावश्यक महसुस गराउँछ । त्यसैले तपाईं भावनाहरूले भरिनुभयो जुन आँखाको मार्गबाट ​​बाहिर आउँदछ ।
महिलाले आफ्नो पा-र्टनरसँग शा-री-रिक सु-खभो’ग राख्छ, पूर्ण उर्जा बाहिर आउँदछ । यसले आँखा हर्षको आँसुले भरिन् सक्छ ।
धेरै चोटि शा-रीरिक सु-खभो’गको अनुभवले उनीहरूलाई नराम्रो घातको सम्झना गराउँछ । यस्ता महिलाहरुमा रुने कुरा धेरै सामान्य पाइएको छ । शा-री-रिक सु-खभो’गको बारेमा कसैको विचारहरू धेरै संकुचित वा निषेधित छन् भने पनि, उनीहरू पछि ला-ज महसुस गर्न सक्छन् र रुन थाल्छन् ।
डा. बर्मी भन्छिन्, ‘जब लामो समयपछि कुनै महिलाले आफ्नो पा-र्टनरसँग शा-रीरि-क सु-खभो’ग राख्छ, पूर्ण उर्जा बाहिर आउँदछ । यसले आँखा हर्षको आँसुले भरिन् सक्छ ।’ शारी-रिक सु-खभो’गको समयमा अत्यधिक आन्नद मिल्दा पनि महिलाहरु रुने गर्छन । यसलाई पनि सामँन्य रुपमा नै लिने गरिएको छ ।
हा-र्मोनल असन्तुलनका कारण महिलामा प्रसुतिपूर्व डि-प्रेसन धेरै सामान्य लाग्छ । यदि शा-री-रिक सु-खभो’गको प्रसवोत्तर समयमा हुन्छ, महिला भावनाहरु को कारण -रोइरहेका हुन्छन् । उनी भन्छिन्, ‘पीसीडीको दर प्रसव–उदासीन महिलामा बढी छ । यदि यो बारम्बार भइरहेको छ भने विज्ञहरूको परामर्श लिनुहोस् ।’
‘के तपाईका पार्ट-नरहरू तपाईसँग सन्तुष्ट छन् ? यो प्रश्न सबैको दिमागमा हुन्छ । जब यो दबा-ब धेरै उच्च हुन्छ, नतिजा रुनु नै हुन्छ ।’
सामान्यतयाः पुरुषमा जस्तै, महिलालाई पनि एक समस्या आम हुन्छ । त्यो के हो भने शा-री-रिक सुखभो’गको समयमा कस्तो प्रदर्शन गर्ने भन्ने चि-न्ता हुन्छ । यदि उनीहरुको सोचनुसार केही भएन भने तिनीहरू तना-वग्रस्त हुन्छन् । तनावको सीधा प्रभावले उनीहरु रोइरहेका हुन्छन् ।
सामान्यतया यो धेरै सामान्य हुन्छ । त्यसकारण यस्तो कुरामा चिन्ता लिइरहनु आवश्यक हुँदैन । त्यसकारण तपाईं एक्लो हुनुहुन्न, आफैलाई कमजोर नबनाउनुहोस् । तपाईंको पार्टनरसँग कुरा गर्नुहोस् र आवश्यक परेमा विशेषज्ञहरूको सल्लाह लिनुहोस् । जनबोलीबाट